Imigaqo yoyilo Wonke uMyili wemizobo kufuneka ayazi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Njengokuba kuqhele ukwenzeka kuyo yonke imisebenzi, isigama esetyenziswa kwicandelo eliqhelekileyo aliqondi ngabantu abangeyonxalenye yalo. Ngokuqhelekileyo Kunzima kuthi ukuba sichaze into Ngamanye amagama, ukuze umntu wangaphandle asiqonde kwaye azi ukuba sifuna ukufezekisa ntoni kwaye yintoni ekufuneka siyenzile ukuze imveliso yethu igqibelele.
Ukuba sigxila kwi indawo yoyilo, Qiniseka ukuba uvile Yintoni ubugcisa bokugqibela? Uyintoni umahluko phakathi kwe-RGB kunye ne-CMYK? Athini amanqaku ezityalo? Yintoni uxwebhu lwevektha? Nguwuphi umahluko phakathi kwe-inki rhoqo kunye ne-inki yendawo?
1 Imigaqo eyimfuneko yoyilo lwegraphic
1.1 Ubugcisa bokugqibela
1.2 CMYK- Umbala-ezine
1.3 Sika amanqaku
1.6 I-inki ngqo kunye nebala leinki
Imigaqo eyimfuneko yoyilo lwegraphic
Ngokuqinisekileyo oku kwenzekile kuwe ngaphezu kwesihlandlo esinye, ke siya kuzama ukuqala uyilo lwesichazi-magama ngamagama esiwasebenzisa kakhulu kubomi bemihla ngemihla.
Ukuba sithumela umyalezo kumthengi ukuba asixelele ukuba ubugcisa bokugqibela bulungile, oku kuthetha ukuba isinamathiselo silungile kwaye ayamkeli utshintsho ngakumbi, Oko kukuthi, kufuneka ithunyelwe kwimveliso.
Kwaye ukuba ubona ukumakisha okunqabileyo kunye nendawo engaphezulu kwindawo ekungqongileyo, le yi uphawu lwegazi kunye nophawu lokusika kwaye awunakukhathazeka malunga nayo.
Inkqubo yokuprinta yile ngokusekwe kwiintlobo ezine ze-inki, umbala wecyan, magenta, tyheli kunye nomnyama kwaye kule mibala yonke iya kufumaneka, ke abaqulunqi ababhekiseli kwezi CMYK, Le yile Inkqubo esetyenziselwa ukushicilela, ke ubugcisa bokugqibela kufuneka bube phakathi kwenkqubo.
Khumbula ukuba imifanekiso zivela kwifomathi yedijithali ke baya kuba kwi-RGB kwaye kubalulekile ukwenza utshintsho ngexesha.
Le yimigca encinci egazini loxwebhu leyo Baza kunciphisa ubungakanani bephepha kwiikona, njengoko befuna ukulungelelanisa i-guillotine ukuze uyilo lusikwe. La manqaku angaphandle kwendawo yoyilo ngoko aya kususwa emva kokuprinta.
Zezi umbala obomvu, oluhlaza kunye nohlaza okwesibhakabhakaOko kukuthi ukubunjwa kusekwe kwezi inki zintathu.
Yiyo Inkqubo esetyenziswa zizikrini zeTV kunye neekhompyuter, Ke ukuba uyilo luza kuprintwa, akufuneki uxhomekeke kwinto oza kuyibona kwikhompyuter kuba ziya kudlula kutshintsho xa ziprintiwe.
Ngalo lonke ixesha khumbula ukuba oyena mlingani wakho mhle kukushicilela iimvavanyo.
Kubalulekile xa sifuna iphepha libe ne Faka umbala emphethweni.
Oku kubalulekile kuba ukuba kukho ingxaki ekusikeni kunye ne-guillotine, umbala uya kuhlala uvela kwiphepha kwaye akuyi kubakho zi-flakes zijikelezileyo. Kwezi ndawo zegazi kulapho imigca yokusika ibekwe.
I-inki ngqo kunye nebala leinki
Le yi-inki esele ixutywe ngumenzi ukuze kuveliswe umbala okanye isiphumo ngqo sokuprinta.
Oku kukuvumela ukuba uqiniseke ukuba uza kusebenzisa umbala wenkampani yakho ngokuchanekileyo kwaye iziphumo zizinto ozifunayo. Kufanelekile ukuba sikhankanye loo nto le mibala ingahluka kuxhomekeke kwitoni okanye inkqubo yoshicilelo ukuba itshintshiwe.
Yiyo Igama elisetyenziswa ngokubanzi kuyilo Oko kubhekisa kwizinto ezizimeleyo zejometri eziza kudityaniswa ukuze zikwazi ukucacisa amanani ejiyometri kunye nemizobo entsonkothileyo.
Iifowuni zemifanekiso yevector zisinika amathuba amaninzi xa sifuna ukuphinda senze ubungakanani kwakhona okanye sihlele imizekeliso, kuba zenziwe zizinto ezizimeleyo ukuze zingaphambukiswa kwaye zingalahli umgangatho wazo. Le yindlela elungileyo yokuqinisekisa ukuba banesisombululo esifanelekileyo sokuprinta.
Njengoko ubona, akusekho mfuneko yokuba nexhala ukuba abayiqondi into oyithethayo, unokubanika enye yezi ngcamango ukuze bakuqonde ngokugqibeleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Amagama ayiliweyo Wonke uMyili wemizobo kufuneka awazi
URafa Villarraso sitsho
Molo Jorge, eli nqaku liyasebenza kakhulu. Ndiqala kwicandelo kwaye ndikubona kufanelekile kakhulu. Kwelinye icala, ndamangaliswa kukubona ukuba ungumntu onzima. Ndiphinde ndafunda i-technical Architecture, nangona ngoku ndikwinkqubo yokufudusa ubugcisa bam ndiyile kwimizobo kunye nemifanekiso, into ebisoloko indithathela ingqalelo, endiyithandayo.
Enkosi kwakhona ngenqaku kunye nokumalunga.
Phendula kuRafa Villarraso
Ukugxila kumabala kunye neFotohop ukwenza into ibonakale kwifoto